Iindaba - Imiyalelo malunga nemigaqo yokusebenza yokuqaliswa kwezibane zokungabikho kokuqhuma kunye nezibane
Iiofisi kunye nabahambisi:
Ngokutsho kwesebe lenkampani emva kokuthengisa, kwiminyaka yamuva, iingxaki zokuthengisa emva kokuthengiswa kwezibane ze-LED eziqhumayo zibangelwa ukufakwa ngokungafanelekanga kweentambo zomsebenzisi.Ke ngoko, sicacisa imigaqo yokusebenza yenkampani yethu kwizibane ze-LED ezinobungqina bokudubula kunye neentambo.
1. Amacandelo esixhobo sokukhokela kunye nokukhetha ucingo
Njengoko kubonisiwe kulo mzobo, ukususela ngo-Agasti, izibane ze-LED zenkampani yethu zingaqhushumba kunye nezixhobo zokwazisa izibane zonke ziphuculwe.
Yenziwe ngomkhono wangaphandle womsesane kunye nomkhono ongaphakathi womsesane wokutywina.
Emva kokudibanisa okupheleleyo:
Qaphela: Umgca ongenayo wezibane ezinobungqina bokudubula kufuneka usebenzise i-PVC ekhuniweyo okanye i-rabha ekhuselwe intambo emithathu enemisonto enye.Akuvumelekanga ngokungqongqo ukusebenzisa iingcingo ezinondoqo omnye okanye ukuhluba i-cable sheath kwaye usebenzise imicu emininzi ukukhokela ngomngxuma wocingo.Ukuba iingxaki ezisemgangathweni ezibangelwa oku azifakwanga kwiwaranti.
Qaphela: Kukwaphosakele ukusebenzisa iteyiphu ukusonga iingcingo ezintathu kunye.
Isikhumbuzo esikhethekileyo: Kukho iibhendi zerabha ezinemingxuma emithathu kwimarike njengoko kubonisiwe kulo mfanekiso ungezantsi.Umgangatho we-GB3836 umisela ukuba ibhendi yerabha yesixhobo sokwazisa kufuneka ibe yirubha yomngxuma omnye.Ngoko ke, ibhendi ye-rubber ye-3-hole ayihambelani neenkcukacha kwaye ayikwazi ukusetyenziswa.
2. Isikrufu soxinzelelo kunye nendlela yokufaka intambo yangaphakathi
Emva kofakelo oluchanekileyo, kufuneka ubeke ingqalelo kula manqaku ama-3 alandelayo:
1. I-screw compression kufuneka iqiniswe ukuqinisekisa ukuba intambo ayikwazi ukutsalwa kwaye ivalwe;
2. Intambo yangaphakathi kufuneka idlule kwindandatho yokutywina irabha ngaphezu kwe-5mm kwaye emva koko ikhuphe ulusu lwangaphandle ukuze lufakwe;
3. Akuvumelekanga ukulahla umsesane wokutywina ngokuthanda kwakho okanye endaweni yeringi yokutywina evulelekileyo ngaphandle kokugunyaziswa.
Okwesithathu, ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kweringi yokutywina
1. Xa ububanzi bangaphandle bekhebula ≤10mm, nceda ugcine umkhono wangaphakathi wendandatho yokutywina (njengoko kuboniswe kumfanekiso (1));
2. Xa 10mm
3. Xa i-diameter yangaphandle yekhebula ingaphezulu kwe-13.5mm, nceda ucinge ngokutshintsha ikhebula (ukuhlutha isikrweqe) okanye ukusebenzisa ibhokisi ye-junction yenguqu.
Oku kungasentla yinxalenye yomsebenzi wokwaziswa kwezibane zethu ezingaqhushumba kunye nezibane.Iingxaki ezisemgangathweni ezibangelwa ukusebenza ngokungahambisani nale nkcazo aziyi kubandakanywa yiwaranti.